Fidinanana tao Fasintsara | Primature
Lapan’i Mahazoarivo, ny 14 septambra 2021– Taorian’ny fahamaizana niseho tao amin’ny fokontany Andranomaitso, kaominina ambanivohitr’i Fasintsara, distrikan’Ifanadiana ; ary araka ny nampanantenain’ny Praiminisitra Ntsay Christian, dia nitarika ny governemanta nankany an-toerana ny tenany androany, nijery ifotony ny fahavoazan’ireo mpiray tanindrazana sy nampahery azy ireo, ary nitondra ny fanampiana tamin’ny anaran’ny Filohan’ny Repoblika sy ny fitondram-panjakana.
Isan’ireo delegasiona tamin’izany ny minisitry ny Fiarovam-pirenena, ny minisitry ny Mponina, ny Sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimariam-pirenena, ny Solombavambahoaka voafidy tao Ifanadiana .
Niandraikitra ny filaminana sy ny asa fanarenana ny Tafika Malagasy sy ny Zandarimariam-pirenena, ary nankinina tamin’ny BNGRC kosa ny fandaminana sy fizaràna ny vatsy.Raha nandray fitenenana ny Praiminisitra dia nampahery ireo mponina ao Andranomaitso ary nanentana ny amin’ny fifankatiavana, ka notsiahiviny fa mijery ny vahoaka Malagasy mandrakariva ny fitondram-panjakana.
Nisaotra ny fokonolona sy ny tompon’andraikitra rehetra tao an-toerana ny tenany, niara-nisalahy tamin’ny fitadiavana ny olona nahavanona ny loza, ka nanolotra azy ireo tamin’ny mpitandro ny filaminana, ary nambarany fa hosaziana araka ny lalàna velona izany olona izany.
Nankasitrahany ihany koa ny ezaka nataon’ny Solombavambahoaka tamin’ny fanaovana tatitra avy hatrany raha vao nitranga ny voina.
Novorian’ny Lehiben’ny governemanta tamin’io fotoana io ny governoran’ny Faritra Vatovavy-Fitovinany sy ireo mpiara-miasa akaiky aminy, handinihana ny hanomezana asa fivelomana ho an’ireo tokantrano maro niharan’ny fahamaizana.
Fanampiana maro isan-tsokajiny, andraisana an-tanana an’ireo mponina napetraka vonjy maika ao amin’ny Sekoly Fanabeazana Fototra Andranomaitso, ary entina hanorenana ny tanàna rava, izao natolotra androany izao ka nanome toromarika hentitra ny Praiminisitra ny amin’ny tsy tokony hisian’ny fanodinkodinana, mba hisitrahan’ny tra-boina an’izany araka ny efa nandaminana azy, sy hanatrarana ny tanjona fanarenana ny tanàna.
Ka toy izao ny voarambin’ny tanana ho voin-kava-mahatratra :
Fanitso miisa 400, fantsika 30 kilao, labasy fialofana 12 m² miisa 5, kojakoja ilaina amin’ny andavanandro (fotsimbary, siramamy, menaka, tsaramaso, paty, savony, labozia ), kojakojan-dakozia (vilany, sotro, siny plastika, lovia, koveta, zinga, kaopy), kojakojam-pianarana ( kitapo, kahie, penina, fitsipika, pensily hazo, pensily fandokoana, kapa, fanamoana fitondra mianatra), fitafiana, bodofotsy, ary kojakoja fitsaboana 55 karazana.
Marihina fa naneho fankasitrahana feno ho an’ny Filohan’ny Repoblika, ny Praiminisitra, ary ny governemanta manontolo, izay tsy niandry ela tamin’ny fanampiana mahakasika izao voina izao, ny Solombavambahoakan’Ifanadiana. Nomarihiny fa tsy nahasakana ny governemanta hijery ny fahavoazana tao Andranomaitso ny haratsin’ny lalana, ary sambany, hoy ihany ny tenany, hatrizay no nisy Praiminisitra nitsidika an’izany toerana izany.
← Fahamaizana tao amin’ny kaominina Fasintsara
Fitsidihan’ny Ambasadaoron’i Suisse →
Fanomezana ho an’ny CCO-K
Fitsidihana ny toby famatsian-drano ao Anosizato